Exhibitions - Tianjin TheOne Metal Products Co., Ltd.
Muna 2020 na2021, tinoenda kuCanton Fair nekurarama pamhepo uye tinoenda kushanghai hardware show uye China Yiwu Hardware&Electrical offline.inotibatsira kukudziridza vatengi vakawanda.
Muna 2019, tinopinda Canton Fair kubva 125 kusvika 126th .Takapindawo Big 5 Fair uye Automechanika Shanghai.Zvinoenderana nekupinda fairs, yakawedzera kuoneka kwekambani yedu.
Muna 2018, tinoenda kuCanton Fair kubva 123 kusvika 124, takawana iyo 150,000 usd odha panguva yakanaka, maererano neruzivo rwedu rwakapfuma, tinowedzera misika yenyika dzakawanda uye vatengi vakawanda.
Muna 2017, takapinda Canton Fair kubva 121th kusvika 122th.apa takatanga kuenda kuma Exhibitions ekunze.Muna Zvita, takapinda Big 5 Fair uye tinoshanyira vatengi veko.Zvinotora mukana wakawanda kuvaka hukama hwekubatana.
Muna 2014 na2015 na2016 takaenda kuCanton Fair kubva 115 kusvika 120, Maererano nemitambo iyi, tinowana ruzivo rwakawanda rwekutengesa kunze kwenyika uye tinopa basa rakanaka kune vatengi.
Muna 2013, takatanga kuenda ku114th Canton Fair.Iwo mukana mutsva uye dambudziko kuvhura musika wepamba nekunze.isu tinovandudza nyika dzinoverengeka vatengi uye tinowana kuvimba nerutsigiro kubva kune vatengi.